आजको आवश्यकता हो, चुनौतीलाई अवसरको रुपमा परिण्त गर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ : अर्थ राज्यमन्त्री उषा यादव
श्रावण २८, २०७६ निलम पंत
नयाँ नेपाल निर्माणको आवाज संगै जनतालाई फकाएर राजनीतिक गतिमा होमिएका नेपालका राजनीतिक दलहरु प्रायः यतिबेला जनताको काम गरेर देखाउने ठाउँमा पुगेका छन् । नयाँ संघिय संरचनामा विभक्त मुलुकका जनताको अपेक्षा अनुसार उनीहरुले काम गर्नुपर्ने छ । यो समय राजनीतिक दल या प्रतिनिधीहरुले जनताका लागि काम गरेर देखाउने सुनौलो अवसर पनि हो । राजनीतिक दलहरुले सहजताका साथ समाधान गर्ने दिशामा अगाडी बढे उनीहरुका लागि पनि आगामी राजनीतिक दाउँपेचँ पुरा गर्ने सुनौलो अवसर पनि हुनेछ । राजनीतिक दल र नेताहरुले आन्दोलन र निर्वाचनका समयमा जनतालाई जति आश्वासन दिएका थिए, त्यो सबै मिथ्ता सावित हुने सम्भावना देखिन्छ । यसै चर्चा–परिचर्चामा रहेकी यादव वि.सं.०६४ सालदेखि लगातार सक्रिय भई राजनीतिमा अगाडी बढ्दै संघिय समाजवादी फोरम नेपालको तराई मधेश प्रदेशको सदस्य, केन्द्रिय परिष्द सदस्य तथा गएको स्थानीय निकायको चुनावमा बारा जिल्ला क्षेत्र नं. २ बाट समानुपातिकबाट अर्थ राज्यमन्त्रीमा मनोनित भई हाल विरगंज महानगरपालिका रानीघाट आफ्नै निवासमा बसोबास गर्दै आईरहेकी छिन । तिनै २ नं. प्रदेश अर्थ राज्यमन्त्री उषा यादबसंग आर्थिक अवस्था र विकासको सम्भावना सम्बन्धमा समसामयिक विषयमा मध्य नेपालले गरिएको कुराकानी :
१) अहिले के मा व्यवस्त हुनुहुन्छ ?
खासै हाम्रो मन्त्रालयको काम सकेको छ । हाम्रो अर्थ विधायक पास भयो । हामीले बजेट पास गरायौ । अनि त्यो काम सिध्याएर हामीले आफनो क्षेत्रतिर दिएको योजनाहरु कस्तो भयो । योजना सफल भयो कि भएन भनेर अनुगमन हामीले गरिरहेका छौ ।
२) तपाई निवार्चित भएको लगभग दुई वर्ष पुरा भइसकेको छ, कसरी कार्य गर्दै हुनुहुन्छ ?
लगभग दुई वर्ष हुन लाग्यो । हामीले काम गरेको शून्य बाट हो । नयाँ संरचना त्यसमा पनि नयाँ संघियता आएको हो । काम गर्न कठिनाइ नै हुन्छ । त्यै पनि शून्य बाट सुरुवात गरेर अहिले सम्म भौतिक पूर्वाधारका कामहरु देखि विकासका काम, कर्मचारी व्यवस्थापन लगायत धेरै काम गरिसकेका छौ ।
अहिले विकासका काम भन्नुहुन्छ भने पहिलाको भन्दा केही गति लिएको छ । प्रदेश सरकारले केही गरेको छैन भनेर पनि जन गुनासो सुनिन्छ तर प्रदेश सरकारले यस्तो अवस्थामा कुनै जनशक्ति नभएको अवस्थामा, कर्मचारी आफनो नभएको अवस्थामा, साधन–स्रोत नभएको अवस्थामा, अर्थ प्राप्त नभएको अवस्थामा जति छ त्यतिकैमा प्रदेश सरकारले एकदम दिन–रात मेहनत गरेर पनि काम गरेको छ । अनि विकासको काम पनि अगाडी बढाएको छ ।
३) अहिलेको अवस्थामा राजनीति महिलाको लागि अवसर र चुनौती के पाउँनु भएको छ ?
अहिलेको समयमा राजनीति महिलाको लागि अवसर र चुनौती दुवै छ । महिलालाई राजनीतिमा सक्रिय रहन आर्थिक, सामाजिक लगायत थुप्रै कुराले साथ दिन सकेको छैन । पितृसत्तात्मक सोच भएको नेपाली समाजमा महिला स्ंवयमले नेतृत्व गरेर राजनीतिमा होमिनु आफैमा कम चुनौती छैन ।
महिलाले घरको पूर्ण जिम्मेवारी पुरा गरेर राजनीति गर्नुपर्ने बाध्यता पुरुष प्रधान समाज र परम्परागत सोच दुवै मुख्य चुनौती छन । चुनौती नभएको केही हुदैँन । तर चुनौती संग डगमगाएर चुप बसेको भए अहिले देशमा राष्ट्रपति, सभामुख जस्ता उच्च पदमा महिला पुगेको हुदैँन थिए । राजनीतिमा आत्मविश्वास र शक्ति दुवै हुनुपर्छ ।
४) वार्षिक कार्ययोजना अनुसार काम सकेर अहिले नयाँ कार्ययोजना बनाउने क्रममा यहाँहरु हुनुहुन्छ । प्रदेश नं २ का. लागि जुन योजना बनाउनु भयो , त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न कत्तिको सफल हुनुभएको छ ?
योजना त हामीले धेरै बनायौ । तर योजना अनुसार वास्तवमा हाम्रो काम किन भएन भन्दा त्यो सर्वविद्धीत नै छ । नयां संरचना हामीलाई पनि त्यति थाहा छैन । संविधानमा नै हाम्रो अधिकार स्पष्ट छैन । त्यो नीति स्पष्ट हुनुप¥र्यो कि प्रदेश सरकारको काम, अधिकार के हो ? यसमा अर्थमन्त्रालयको उदाहरण दिन्छु । कर्मचारीहरुलाई थाहा थिएन कि कुन–कुन राजस्व संघिय सरकार र प्रदेश सरकारको खातामा जानुपर्नै हो । त्यस्ता किसीमका ऋटिहरु पनि छन् । त्यसमा न कर्मचारीको दोष छ न त जनप्रतिनिधी ।
मेरो क्षेत्रको कुरा गर्दा मैले दिएको योजना पचँरौता गाउँपालिकामा असफल भयो । त्यहाँ फोरम र राजपाको विवादले कार्यक्रम हुन सकेन । तर हाम्रो गढिमाई गाउँपालिका, करैयामाइ नगरपालिका सबै योजना सफल भएका छन् । मैले बेला–बेलामा आएर स्थानियमा मेयरहरु संग समन्वय गरेर आफनो गाउँपालिकामा २५ सैयाको अस्पतालको सुरुवात गराए । त्यस्तै पचाँस लाख को लागतमा गढिमाई नगरपालिकामा क्रिकेट स्टेडियम, अर्को सामुदायिक भवन, सडक बनाउने काम पनि सफल भएको छ ।
५) तपाई २ नं. प्रदेशकै स्थानीयबासी हुनुहुन्छ । महिला पनि हुनुहुन्छ । तपाईलाई अर्थ राज्यमन्त्री बन्नको लागी कतिको सर्घष गर्नुप¥र्यो त ?
यथार्त सबैलाई थाहा छ । महिलालाई अगाडी बढ्न नै दिदैनन् । म समाजको विकृती हेरेर यो राजनीतिमा आएको हो । जबसम्म महिला राजनीतिमा आउँदैनन् तब सम्म यो समस्या समाधान हुदैन । किनभने नियम–कानुन उनीहरुले नै बनाउँछन । कहि न कहि पक्षपात गरिरहेका हुन्छन् । महिलाले चलाउन सक्दैन भनेर उहाँहरुले टिकट दिनुभएन । तर मेरो क्षेत्र अहिले पनि एकदम बलियो छ । मैले आफनो क्षेत्रमा विश्वास जगाएको छु । मलाई टिकट नदिइ समानुपातिकमा राख्नुभयो ।
समानुपातिकमा जानको लागि पनि धेरै लडाइ गर्नुप¥र्यो । पार्टीमा मेरो लगानी पनि छ । तर पार्टीले मलाई दिनुभयो । सम्झौता पनि गरेको थिए । मेरो १ नं.मा नाम थियो । म सभासद भए । त्यसपछि अर्थराज्य मन्त्रीको लागि फेरी पनि लडाइ गर्नुप¥र्यो । उहाँहरुले आश्वासन दिई पछि हुन्छ भन्नुभयो । पेपरमा नाम आयो । मेरो जिल्लामा धेरै नै विरोध भयो । मेरो विरोधीहरुले त्यो महिलाले गर्नै सक्दैन । उ आयो भने मेरो संगठन नै खत्म हुन्छ भनेर धेरै विवाद आयो । तर पछि हाम्रो पार्टीका पदाधिकारी, माननीय नेताहरुले कदर गर्नुभयो । मेरो पार्टीको महिला नेतृ मेरो लागि धेरै लडनुभयो । अनि मैले पाए ।
६) यहाँ महिला हुनुहुन्छ । प्रदेशलाई नै कार्यथलो बनाएर प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ । यहाँका महिलाहरुको लागि विशेष योजना के छ ?
जब सम्म महिला आर्थिक, राजनीतिक, चेतना र शिक्षामा आफु सक्षम हुदैँनन् । तब सम्म यो समस्याको समाधान कसैले गर्दैनन् । प्रदेश सरकारको आफनो नीति तथा कार्यक्रम छ । जागीर मा महिलालाई पचास प्रतिशत, प्रहरीमा पचास प्रतिशत महिला आरक्षण आर्थिक हिसाबले पनि सबलको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु पनि संघिय सरकारले चलाईराखेको छ ।
मेरो विचारमा महिलालाई अर्थमा जुन महिला एकल, हिंसामा पारिएका वहाँहरुको लागि एउटा ठूलो प्रादेशिक महिला लघु उधोग केन्द्र स्थापना गर्न को लागि तयारी बनाइसकेको छु । मुख्य न्यायधिसवतmा दिपेन्द जी लाई जिम्मा दिएको छु । त्यसको लागि ठाँउ पनि अवलोकन गरिसकेको छु । १३ विगाहको छ । त्यसैमा सानासाना उधोग जस्तै मैनबत्ती, अगरबत्ती, कटिङ्ग लगायत गार्मेन्टको काम विभिन्न किसिमका काम त्यस्ता किसिमका कार्यक्रम ल्याउने सोच बनाएको छु । त्यसमा दिनरात मेहनत गरिरहेको छु । अब कति सम्म सफल हुन्छ आशा गर्दछु ।
७) निर्णायक भुमिकामा महिलाको निर्णय मानिन्दैन भनेर चर्चा–परिचर्चा सुन्दै आएका छौ त ?
वास्तवमा यो त परापुर्व कालदेखि नै हो । कार्यकारिणी पद महिलालाई दिन स्विकार गदैनन् पुरुषहरु । अहिले पनि हामी हेर्दै आएका छौ । गाउँपालिका, नगरपालिकामा महिलालाई उपमेयरमा दिएका छन । त्यसमा पनि विवाद भईरहेको छ । कहाँ गर्न दिन्छन् । जुन महिला उनीहरुले भने अनुसार गर्छन । त्यो एकदम ठिक महिला । जुन ठाउँमा महिलाले म गर्न सक्छु ।
मेरो अधिकार हो भन्ने ठाउँमा त्यहाँ विवाद आईरहेको छ । कारण एउटै हो । कार्यकारिणी अधिकार । म के भन्छु भने यदी कसैले हप्काएदियो भने हामी डराएर चुप लागेर बस्छौ । त्यस्तो गर्नुभएन । क्षमतावान बनेर अगाडी बढनुपर्दछ । हामी सक्दैनौ भनेर मानसिकता बनायौ भने कहिले अगाडी बढ्दैनौ । हामी जहाँको त्यही रहन्छौ । तर पुरुषभन्दा बढि महिला ले गर्न सक्छन । पुरुष वेइमानी पनि गर्छन तर महिला इमान्दारीको साथ काम गर्छन ।
८) प्रदेश नं.२ मा यहाँले कार्य गरेको अनुभवको आधारमा अर्थको हिसाबमा महिलाहरुले कत्तिको आफनो नियन्त्रणमा अर्थहरु पार्जन गर्न सकेका छन जस्तो लाग्छ ?
वास्तवमा अर्थको हिसाबमा महिलाहरुले मेरो भनेर अहिले सम्म १० प्रतिशत पनि त्यस्तो महिला देखेको छैन । त्यही महिलाको आफनो सम्पत्ति माथि हक छ जुन महिला एकल छन् । जसको घरमा कोही छैनन् । त्यहि महिलाको सम्पत्ति माथि मात्र स्वामित्व अधिकार रहन्छ । जस्तैः तपाईको नाममा जग्गा छ तर तपाइ आफनो स्वःइच्छाले बेच्न सक्नु हुन्न । हामीले लगाएको सुनमा पनि पुरुषको अधिकार हुन्छ । यावत कुराहरु छ । कहि पनि महिलाको सम्पत्ति माथि नियन्त्रण, अधिकार छैन जस्तो मलाइ लाग्दछ ।
९) प्रदेश नं. २ कृषिमै आधारित छ जुन महिला अगाडी बढ्न चाहन्छन्, त्यस्तो महिलाको लागि उत्प्रेरणा जगाउन के गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?
मैले जति गरे नि जब सम्म महिला आफु सचेत हुदैँनन्, विचारले सबल हुदैनन् । चेतना आउँदैन, वास्तवमा सक्षम हुदैनन् । तब सम्म मैले जति कार्यक्रम संचालन गरेपनि या परिक्षण दिए पनि त्यो सायद सम्भव छैन । त्यसकारण मेरो विचारमा सबभन्दा शिक्षा दिनुपर्छ । शिक्षामा कसरी महिलालाइ स्वालम्बी बनाउने । जब शिक्षामा स्वालम्बी हुन्छन् । शिक्षा एउटा यस्तो माध्यम हो । जसले चेतना ल्याउँछ । यो मेरो हो, अधिकारको अनुभुति गराउँछ । पहिचान गराउँछ ।
म सुरुदेखि नै राजनीतिमा लागेको नै हो महिलालाइ कसरी सक्षम बनाउने आर्थिक हिसाबले । कसरी स्वालम्बी बनाउने, र आफनो खुट्टामा उभ्याउने यो लक्ष्यर लिएर राजनीतिमा आएको हु । सबै साथीभाइको पनि साथ पाएर अगाडी बढेको छु । हामी त नियम कानुन बनाउने मात्र हो । त्यसको कार्यान्वयन त सबैले गर्नुपर्छ । हुन त म अर्थराज्यमन्त्री हो । राज्यमन्त्रीको अधिकार कति हुन्छ सबैलाइ थाहा छ । ज
ति मेरो अधिकार छ म त्यति मै आफुले सक्दो प्रयास गरिरहेको छु । हरेक ठाउँमा अफ्ठ्यारा, बाधा, अडचन छन् । तर पनि यो चुनौती बाधालाई अवसरको रुपमा परिणत गरेर अगाडी बढिरहेको छु । महिलाका लागि धेरै योजना छ । धेरै कठिनाइको कारण त्यो योजना अगाडी ल्याउन खोजिरहेको छु तर सफल भइरहेको छैन । म केविनेटमा छैन । निणर्यमा छैन । प्रत्येक जिल्लामा महिलाहरुका लागि लघु उधोग केन्द्र स्थापना गर्ने सोच राखेको छु । साना उधोगसंग समन्वय गरेर महिलालाई कहि न कहि अर्थमा सबल दिर्घकालिन सोच रहेको छ ।
#अर्थ राज्यमन्त्री उषा यादव
मगलवार, श्रावण २८, २०७६, १०:०८:००